Adobe dia manolotra vahaolana lehibe ho an'ny RAW fakan-tsary | Famoronana an-tserasera
Inona no vaovao ao amin'ny Adobe for Photoshop amin'ny iPad sy ny Super Resolution ho an'ny Camera Raw sy Lightroom
Miverina miaraka amin'ny vaovao ho an'ny Photoshop amin'ny iPad i Adobe, roa amin'izy ireo fotsiny, ary inona izany fehin-kevitra lehibe ho an'ny Camera Raw sy Lightroom. Ho an'ny farany dia mila miandry kely isika, satria amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy ho an'ny Camera Raw.
Na dia nanambara aza i Adobe fa tsy ho olana maharitra fa afaka mampiasa an'io vahaolana lehibe io isika avadiho ny sary 10MP ho an'ny 40MP iray amin'ny tsindry iray ary misy valiny kalitao.
Rehefa avy nahalala ny Vaovao Adobe ho an'ny horonantsary tamin'ny martsa, Photoshop amin'ny iPad dia misy endri-javatra voalohany tokony horaisina: ny tantaran'ny Version ao amin'ireo antontan-taratasy ao anaty rahona sy izany mamela antsika hiverina amin'ny maody Ctrl + Z be indrindra, ary mba haiko mizaha tantara hatramin'ny 60 andro. Fiasa manaitra sy mamokatra tsara izay ho fantatry ny maro ny fomba hanararaotana azy.
Raha ny marina dia azo asiana marika ireo dikanteny mba tsy ho lany daty, homena anarana ary hotehirizina maharitra. Ny zava-baovao faharoa amin'ny Photoshop amin'ny iPad dia misy ifandraisany amin'ny rahona ihany koa ary manondro ny fahafaha-mitahiry ireo rakitra eto an-toerana ao anaty rahona isika; Toy ny amin'ny Dropbox, ohatra, mamela antsika hanana folder hisokatra avy eo.
Ny tena mamela izany dia izany afaka miditra amin'ireo rakitra ireo isika rehefa tsy manana fifandraisana na tapaka isika. Raha ny marina Adobe dia nanisy izay tsy tianao na mitahiry azy eo an-toerana avy amin'ny toe-javatra amin'ny iPad.
Angamba ny mafy indrindra dia ny Fahaiza-manao Super Resolution amin'ny plugin Adobe Camera Raw ao amin'ny Photoshop, izay tena manao izay voalaza etsy ambony. Ny Super Resolution dia mampiasa a Modely fianarana milina mandroso voaofana amina sary an-tapitrisany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manitatra an-tsaina ny sary izy nefa mitazona antsipiriany lehibe sy mitazona ny fahadiovany ho madio.
Nanazava mazava i Adobe fa ho tonga ao amin'ny Adobe Lightroom ihany koa ity Super Resolution ity ary Lightroom Classic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Inona no vaovao ao amin'ny Adobe for Photoshop amin'ny iPad sy ny Super Resolution ho an'ny Camera Raw sy Lightroom
Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet
Adobe Photoshop dia efa eo amin'ny Macs miaraka amin'ny Apple Silicon